Kufamba Kwako Pamwe Chete Rondedzero - Zvinhu zvisere zvekufungisisa zvisati zvaitika - Ukama
Kufamba Kwako Pamwe Chete Rondedzero - Zvinhu zvisere zvekufungisisa zvisati zvaitika
Saka… urikufunga kutamira pamwechete.
Inguva inonakidza zvisingaite iyoyo!
Chinhu chikuru chiitiko mune chero hukama uye inzira huru yekuratidza rudo rwenyu kune mumwe nemumwe.
Usati wasvetukira muhupenyu hwako hutsva pamwe chete, pane zvinhu zvishoma zvekufunga nezvazvo.
Ichi chekuongorora hachina kugadzirirwa kubvisa mufaro wekuenda kunogara nemukomana wako kana musikana, asi chakagadzirirwa kuti chikubatsirei mese kupfava kupinda mune ino nhanho nyowani yehukama hwenyu zvakatsetseka sezvinobvira.
sei ndisingade vanhu
1. Munozochinja sei kuhupenyu hwezuva nezuva pamwe chete?
Funga nezve kuti chokwadi chezuva nezuva chehupenyu chingakanganisa sei hukama hwako.
Iwe unenge uchitenderedza mumwe nemumwe zvakanyanya zvakanyanya kupfuura zvawakajaira.
Iwe uchafanirwa kubata nezvese zvidiki zvinhu - kuchenesa, kutora marara kunze, kuve unogunun'una mangwanani!
Usati wagara nemumwe munhu, haufanire kunge waona zvese zviripo kune hunhu uye mararamiro.
Zvinogona kuuya sekuvhunduka kuona kuti mumwe munhu akaita sei muhupenyu hwavo hwese kana iwe wajaira kuvaona pahunhu hwavo hwakanakisa!
Funga nezve mapinduriro aungaita kuzvinhu zvakafanana navo vachisiya loo chigaro kumusoro (chaizvo, hazvo, nei zvakaoma kudaro?!) Kana kusarudza kuti ndiani anobika kana imi mose muchinonoka kubasa mushure mezuva remarara.
Zvinogona kunge zvakakodzera kumisikidza mimwe mitemo yepasi uye kutaura pachena pane zvaunotarisira zvekugara mumba imwechete.
2. Ino inguva yakakodzera muhukama hwako kufambidzana pamwe chete?
Zvinogona kuve nyore kwazvo kutorwa nehukama hutsva.
Kana zvinhu zvanyanya, iwe unoda kuva padhuze navo zvakanyanya, saka nei kugara pamwe chete kusinganakidze?!
Kune vanhu vazhinji, kana ichinzwa zvakanaka, pamwe ndizvo.
Izvo zvataurwa, zvakakosha kumbomira kwechipiri, kubuda murudo bubble, uye kuve nechokwadi chekuti inonzwa zvakanaka - muhupenyu chaihwo.
Mave muri pamwe kwenguva yakareba zvakakwana kuti iwe ugare wakagadzirira kutora nhanho inotevera?
Wakambogara nemumwe wako kare uye ukave neruzivo rwakaipa?
Kufunga nezvemhando idzi dzezvinhu kunogona kukubatsira zvirinani kugadzirira nhanho huru iyi.
Iwe unogona kufunga zvaunoda kuwana kubva mukugara pamwe chete, uye funga nezvekuti ungarwisa sei chero matambudziko awakatarisana nawo munguva yakapfuura paunenge uchigara nemumwe wako.
Ita shuwa kuti uri kuzviita nekuti iwe unoda kugovana icho chikamu chehupenyu hwako nemumwe nemumwe.
Usazviita nekuda kwekuti ku) zvinonzwisisika zvemari, b) rendi yako yakwira uye iwe ‘ungadarowo,’ kana c) hauna kumwe kunogara!
zvinonakidza chokwadi chekugovana nezvako
Kana iwe uchikwanisa kunyatso sangana nechiitiko ichi kubva kunzvimbo yekufarisisa, chiite icho uye unakirwe nacho.
3. Muchaita sei kuti mese muchengete imwe nzvimbo yenyu?
'Space' chinhu chinofinha uye chinowanzodzingwa mukunakidzwa kwekushandisa yakawanda nguva pamwe chete, asi zvakakodzera kuti ufunge.
Taura nemumwe wako nezve zvaunotarisira, uye ita shuwa kuti unomhanya nekukosha kwenzvimbo yako wega.
Iwe haufanire kuronga mune yega nguva (kunze kwekunge izvo zvichikosha kwauri), asi zvakakodzera kuti utarise kwauchazowana mumwe nemumwe mukana weku decompress kana uchida (mushure mekupokana, semuenzaniso).
Iwe unofanirwa zvakare kuve nechokwadi chekuti mose munoramba muchizvipira kune zvamunofarira zvega.
Pane muyedzo wakakura kana uchigara nemumwe munhu kungoshandisa nguva yako yese navo.
Uye nepo ichitapira zvakanyanya pakutanga, zvingangopedzisira zvaendesa kune chigumbu nekuda kwekushayikwa kwenzvimbo yega.
Izvi zvinogona kuisa kushushikana kukuru pahukama.
Pane kudaro, tarisira izvi zvichiitika uye namatira kune zvimwe zvezvinhu zvaunoda kuita wega kana neshamwari.
Kuve neyako nzvimbo nenzvimbo yekudzikisira pasi zvinoita kuti uve nehutano, hukama hunofadza!
4. Makambokurukura nezvemari here?
Mari inonetsa kutaura nezvayo, tese tinozviziva izvozvo.
Kunyangwe ari mumwe wako achikumbira iyo $ 2.23 iwe yaune chikwereti navo kana iwe uchifanira kunyatso yeuchidza waunogara naye (kwenguva yegumi) kuti rendi iri kukodzera, inyaya inonetsa kuunza.
Nekuzviburitsa pachena usati wapinda mune mumwe munhu, iwe unobvisa iko kusanzwisisika uye zvingangoita chikonzero chekupokana gare gare mutsetse.
Bvumiranai bhajeti yemari yako yegeji / rendi uye mabhiri, uye ita shuwa kuti zvinogoneka uye zvinogoneka kune imi mese.
Maitiro aunoita izvi zviri kwauri zvachose - unogona kuenda wakananga pakati nepakati wobhadhara hafu imwe neimwe, kana kuti unogona kuzviita zvichienderana nemari yaunotambira mumwe nemumwe.
Taura nezvekuti ndiani achatenga zvekutengesa, uye kuti uchavhara sei mari dzisingatarisirwi senge bhaira rako parinopera.
Izvo zvinofinha, asi zvinokuponesa iwe kukakavara pamusoro pazvo gare gare!
Iwe unogona kuwana akaundi account pamberi uye mumwe nemumwe akaisa mari yakatarwa mumwedzi wega wega kubhadhara zvekudya, kana kuchinjana kubhadhara.
Chero nzira, kubvumirana pamaitiro emari yako - uye kuzviita musati matamira pamwe - zvinobatsira zvakanyanya.
Zvinoreva kuti pane nzvimbo shoma yekutsamwa kana mitambo yemagetsi ('ndinobhadhara mari yakawanda kuitira kuti ndisvike pane zvatinodya'), uye zvinobatsira imi mose kuziva pamumire.
Maitiro Ekumupa Iye Nzvimbo: 8 Zvinhu Zvekuita + 6 Zvinhu ZVISINGOITWA
Kupopotedzana Kune Hutano Muhukama? (+ Vaviri Vakaroorana Vanorwira Kakawanda Sei?)
12 Matipi Ekubata Neakanetseka Partner Uye Kubatsira Ivo Zorora
115 Mibvunzo Yekubvunza Yako Inokosha Imwe Kutanga Matanho
100 Zvekuvaraidza Zvevaviri Vaviri Kuti Muite Pamwe Chete: Yekupedzisira Rondedzero!
nzira yekuudza kana vanhu vakakuwana uchiyevedza
5. Ko mumwe wenyu ane marangwanda muwadhiropu here?
Ino inguva huru yekukurukura chero chinhu chawanga uchivanzira mumwe wako!
Kungave kuti iwe wakambove nenyaya nenyaya yekunonoka kubhadhara kana kuongororwa kwechikwereti zvinogona kutadzisa kugona kwako kuroja chimwe chivakwa.
Zvingawe kuti une chikwereti chakawanda chauri kusangana nacho.
Kana izvi zviri zvinhu zvausina kuunza nemumwe wako izvozvi, tinokurudzira kuzviita usati waenda kunogara pamwe chete.
Izvo zvinongokubatsira iwe kuziva kwaumire, uye zvinokupa iwe kutanga kutsva pamwechete.
Uyezve, zvinokurudzira kukosha kwekujeka, kunyanya kutenderedza mari, chinova chinhu chauchakudza kwenguva yakareba yaunogara pamwe chete.
6. Munozogovana sei mabasa epamba?
Isu tinoziva, urwu runyorwa rwuri kuita rwusina kujeka uye rwunonzwika senge hurukuro amai vako yavanokupa iwe - asi icho hachisi chinhu chakaipa!
Taura nezvekuti uchaita sei mabasa epamba semba.
Mumwe wenyu anovenga kubika asi achizofara kuita zvese kutsvaira here?
Zvichida mumwe wenyu anorwara kune bleach asi anofara kutora marara kunze vhiki rega rega.
Taura nezve marongero aunoita kupatsanura mabasa anoshanda mumba usati waenda kunogara pamwe chete, uye zvinokonzeresa mutambo wakanyanya kana iwe uchidaro.
7. Pane here tsika / zvekuvaraidza zvausingade kusiya?
Panogona kuve nezvimwe zvinhu zvaunoda kuita uye zvausingade kurega nekuda kwekuti unogara nemumwe munhu.
Ino inguva huru yekugovana izvo zvinhu.
mapoka emagariro evakuru padhuze neni
Iyo yakanaka nzira yekubatana uye kugovana zvinhu zvezuva rako / vhiki / mwedzi iwe ungangodaro usina kumbofunga kuvaudza nezvazvo zvisati zvaitika.
Izvo zvakare zvinokubatsira iwe kugadzirira hupenyu mune imwechete imba.
Semuenzaniso, unogona kunge uine shamwari yepedyo mune imwe nguva yenguva iyo iwe yaunotarisana nayoTime kamwe pamwedzi - na4am nguva yako!
Iwe haufanire kumira kuita izvozvo, asi zvakanaka kuti mumwe wako azive sezvo zvingavakanganisa zvino.
Vanogona kutamba nhabvu Mugovera wega wega mangwanani, uye vanoda kutarisa kuti unonzwisisa here kuti ndicho chinhu chavo - kunyangwe iwe waive nehurongwa hwekubika brunch pamwe Mugovera wega mumba mako mutsva.
Ndezvekuziva kuti ungachengeta sei zvikamu zvako neupenyu hwako izvo zvakakosha, uku uchizvibatanidza nemumwe wako uye nhanho inotevera muhukama hwako.
Iva akatendeseka pamusoro pezvakakosha kwauri, asi zvakare ive yakavhurika kuti ubvumirane pazvinhu zvishoma zvishoma zvakakosha.
Iko kiyi yekuchengetedza hunhu hwako - uye zvinogona kunge zviri izvo zvaunowana zvinokwezva nezve mumwe wako zvakadaro!
Rangarira kuti mumwe wako anokuda nekuti une shamwari zhinji uye unofambidzana, nenzira imwecheteyo yaunovada nekuda kwekuita zvinhu zvavanofarira kana kuti vari kushingairira.
8. Uchashongedza nekupa sei imba yaunogovana?
Kana iwe uri chero chinhu seni, iwe unozokwanisa kufamba kupinda mukamuri uye ipapo ipapo uone zvinhu zvaungavenga kana kuda.
Makusheni ane fluffy? Kwete.
Feng Shui nemakenduru? Ehe.
Pandakatamira munzvimbo dzekugara dzakagovaniswa kare, zvave zvakaoma kuchinjira kune vamwe vanhu vanosarudza kuronga dzimba dzavo.
Chekutanga-dambudziko repasirese, hongu, asi zvirokwazvo chimwe chinhu chekufunga kana uchigara nemumwe wako.
Kana iwe uri kufamba uchipinda mune yako nzvimbo kana yavo, ita shuwa kuti uyo ari kuita kufamba anowana kuunza humwe hunhu hwavo kumba kwako.
Zvinozovabatsira kuti vanzwe zvakaenzana newe uye zvigoita imba yako yakagovaniswa, kwete imba yemumwe munhu yavanogara.
Kana iwe uchifamba uchienda kunzvimbo nyowani, uzvishongedze pamwe chete, sarudza zvinhu izvo zvamunofarira mese uye zviite iko kugovana kuratidzwa kwako mese
Kugadzirira nzvimbo yemuviri mumba mako kune mumwe munhu kunoratidza kuti yakawanda sei nzvimbo yemanzwiro yaunoita mumoyo mako neupenyu hwavo - corny asi ichokwadi!
Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakakosha kuti uwedzere pane yako yekutarisa usati waenda kunogara nemumwe wako.
Izvo hazviite nenzira inoshamisa kugara pamwechete kusagadzikana, asi zvinokubatsira iwe kugadzirira kwechinguva chekuchinja.
Rangarira, kunzwa kunetseka zvakanyanya kana kunetseka nezvekuenda kunogara nemumwe wako zvakajairika, kunyangwe iwe uchinyatsofara nazvo!
Mumwe wako pamwe ari kunzwa nenzira yakafanana, saka usatya kutaura nezvazvo.
Hazvireve kuti haufanire kutora nhanho inotevera, zvinongoratidza kukosha kwayo kwauri mese.
Kana imi mese muchienda mune izvi zvinofadza uye muchifara kugovana yakawanda yenguva yenyu uye pachedu nemumwe, zvese zvimwe zvinowira munzvimbo.
Hapana hukama hwakakwana, saka chengeta zvaunotarisira zvive zvechokwadi, usanetseke kana uine zvishoma zvishoma zvekurwa iwe uchigara muhupenyu hwako hutsva pamwe chete…
… Uye chengetai bhata rechokoreti uye bhodhoro rewaini mufiriji kwemazuva apo imi mese munofanira kungodzikama uye kuyeuka kuti sei mafunga kutamira pamwe chete pekutanga!
mukomana wangu haandivimbe
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi kana kufamba pamwe chete chinhu chakarurama? Taura zvepamhepo kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.
zviratidzo haasisiri mukati mako zvakare
shamwari dzangu dzese dzinoti kuzvitora zvishoma
kuita sei nemurume anetsamwa
kutamba nesimba kuti uwane nevarume
zvinorevei kana mumwe munhu achikuratidza